Xogta Goobjoog: Xabsiga Godka Jilacow oo Weli Furan, Shaqeeyana! – Goobjoog News
Inkasta oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay horay u shaacisay muddo haatan sanad laga joogo xirista xabsiga godka Jilacow ee magaalada Muqdisho, hadana Goobjoog News ayaa ogaatay inuu xabsigan weli furanyahay, oo dadka lagu xiro.
Xabsigan oo sababaha loo xiray markii hore lagu sheegay cabasho ka timid hey’adaha xuquuqul insaanka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaan la ogeyn sababta weli loo isticmaalayo.
Mas’uuliyiin sare ayaa Goobjoog News la wadaagay caddeymaha inuu xabsiga weli shaqeeyo, oo dadka lagu baaro, laguna xiro.
Jeneraal ka tirsan booliiska Soomaaliya oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in hey’adda booliiska Soomaaliyeed aaney wax ka ogeyn xabsiga inuu furan yahay iyo in kale.
Iskudey xiriir oo aanu la sameynay sirdoonka gobolka Banaadir iyo hey’adda Asluubta ayaan suurogelin.
Wasiir Goodax "Macquul Ma' Ahan In Aan Imtixaannada Puntland Ka Ahaanno Tiimbareeyayaal"